News - FedEx uka égbè tara enweta ego si obodo ego
Ndị FedEx gbara egbe na-enweta ego site na ego obodo
Indianapolis-izu isii agafeela kemgbe onye ogbu egbe gburu mmadụ asatọ n'ụlọ ọrụ FedEx n'ala Indianapolis.
N'oge ahụ, obodo jikọtara aka iji kwado ndị ọdachi dakwasịrị, ndị lanarịrị na ndị ezinụlọ ha, wee bulie ihe karịrị $ 1.5 nde.
Jeffrey Dion, onye isi oche nke National Sympathy Foundation kwuru, sị, "Mgbe ihe ndị dị otú ahụ mere, ndị mmadụ na-enwe mmetụta nke enweghị enyemaka ma chọọ inye aka."
National Sympathy Foundation na-achikọta ma kesaa onyinye ọrụ ebere mgbe mpụ ime ihe ike buru ibu mere.
Nke a gụnyere ezinụlọ onye ahụ, ndị merụrụ ahụ na ndị mmadụ nọ ya. The ego ga-anọgide na-emeghe ruo ọtụtụ izu.
Mgbe ahụ, ndị na-eduzi mpaghara ga-enwe nzukọ na nnukwu ọnụ ụlọ obodo iji mepụta iwu maka ijikwa ego ahụ.
Aasees Kaur, onye ahịa iwu na onye njikwa ọrụ nke Sikh Union kwuru, sị: "Ọ bụ ihe na-emetụ n'ahụ ịmara na ndị mmadụ ka na-a attentiona ntị na mkpa nke ezinụlọ ndị kachasị emetụta."
"Anyị maara na ha ụwa agbanwebeghị, na iru újú ha ga-adị ogologo na sie ike," Kaul kwuru.
"Nweta nkwado dị ka o kwere mee site na nnukwu obodo, ọ ga-aka mma ka anyị bụrụ," Kaul kwuru.
Nwepu ikike 2021 Nexstar Media Inc. Enwere ike ibipụta ihe a, agbasa ozi ya, weghachite ya ma ọ bụ kesaa ya.
Indianapolis - Onye obula kwesiri inwe obi iru ala na ulo ya. Nke a bụ ozi IMPD isi na onye isi oche nke Indianapolis Housing Authority na-akọrọ ndị agbata obi n'oge mbụ "Anụ Mmịkpọ na zuo ike" omume.
Mgbe ụmụaka laghachiri obodo Blackburn Terrace site na ụbọchị ikpeazụ nke ụlọ akwụkwọ afọ a, ha zutere picnics na egwuregwu nke IMPD na IHA nyere. Laghachi azụ Niheim Hines's Indianapolis Colts bịakwara ihe omume a.
Indianapolis - Ọ bụrụ na ịgabeghị Bankers Life Fieldhouse na nso nso a, ị nwere ike iju gị anya oge ọzọ ị ga-erute na etiti obodo.
Oge owuwu ihe a na-aga n'ihu, a na-eji ụja nke nnukwu ígwè anọchi ihu ọchị nke ndị fan. Otu Pacers Sports Entertainment Group kwuru na ọ ga-abụ "ubi nke ọdịniihu", na-emeghe ụzọ maka mmadụ niile, ọ bụghị naanị ndị egwuregwu bọọlụ basketball, ka ha nwee anụrị.
Indianapolis - Ndị ọchịchị na-achọ enyemaka ọha na eze iji chọta nwanyị hapụrụ ụlọ ọgwụ Morgantown.
Guangzhou Ontime nye DHL / FedEx / gbasie / TNT mba mbupu
Post oge: Jun-04-2021